Isku-duwihii wasaaradda amniga Puntland ee gobolka Mudug ayaa caawa Galkacyo lagu dilay. – Radio Daljir
Abriil 8, 2013 2:00 g 0
Galkacyo, Apir 08 -?Isku-duwihii wasaaradda amniga iyo DDR ee Puntland ee gobolka Mudug ?Axmed Maxamed Dhegaweyne ayaa caawa fiidkii rag hubaysani toogasho ku dileen isagoo ku sugnaa xaafadda Garsoor ee magaalada Galkacyo
.Falka lagu dilay mas’uulkaan ayaa waxaa geystay dhawr nin oo sida dad goob-joogayaal ahi sheegeen ku hubaysnaa baskoolado, kuwaasi oo markii weerarku dhacay kaddib ka baxsaday goobta.
Alle ha u naxariistee Dhegaweyne, waxaa meydkiisa la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada Galkacyo, waxaana hawl-wadeenno caafimaad Daljir u xaqiijiyeen wax ka badan labo xabbadood in ay madaxa uga dhaceen.
Hal ruux oo kale ayey wararku tilmaamayaan rasaastaasi in uu ku dhaawacmay, mana jirto illaa haatan ogaal la xiriira dilkaasi iyo cidda ka dambaysay toona.
Magaalada Galkacyo ayaa muddooyinkaan dambe waxaa ka jiray ka soo rayn xagga amniga ah, waxaana aad hoos ugu dhacay weerarada abaabulan ee lagu bartilmaameedsado madaxda dawladda iyo qaybaha kale ee bulsho.